Yiziphi iziphepho ezihlasele kakhulu emlandweni? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Los i-tornados Ziyisimo sezulu esinamandla futhi esinamandla kunawo wonke esingakhiwa emhlabeni. Iplanethi, uma uyibona usemkhathini, ingasinika umuzwa wokuthi ithule, kepha iqiniso ukuthi akunjalo; okungenani hhayi kwezinye izifunda zomhlaba, njenge-United States. Ubufakazi balokhu sinamarekhodi asele kulezi ziphepho, angadala umonakalo omkhulu, kanye nokufa kwabantu.
Uma ufuna ukwazi yiziphi iziphepho ezihlasele kakhulu emlandweni, Ungaphuthelwa yilo mbhalo.
INyakatho Melika, ikakhulukazi i-United States, inomlando obaluleke impela weziphepho ezibhubhisayo, ikakhulukazi emadolobheni afana neMississipi, Oklahoma noma iMore. Nazi ezinye zazo:
I-Tornado Regina: ngonyaka we-1912 isiphepho sahlasela idolobha laseSaskatchewan, eCanada. Ihlale isikhathi esingaphansi kwemizuzu emithathu, kodwa yabulala abantu abangama-30 yabhidliza nezindlu eziyizinkulungwane.
I-Tri-State TornadoNgoMashi 18, 1925, kwavela isiphepho i-EF5 eMissouri (eU.SA). Idlule eMissouri, eningizimu ye-Illinois yanyamalala e-Indiana, yabulala abantu abangu-695.
Talladega Tornado: Ngo-1932, iTalladega County (Alabama) yakha iSiphepho Sesigaba 4 yachitha le ndawo, yabulala abantu abayi-XNUMX.
Iziphepho zase-Oklahoma: Meyi 3, 1999 kwakuwusuku olubuhlungu e-Oklahoma. Iziphepho ezingama-76 sezizonke zawela phansi ngalolo suku, esinye sazo kwaba yi-EF5, eyayizogcina ihlukanise idolobha kabili yabulala abantu abangama-44.
Isiphepho saseJoplin: ngoMeyi 22, 2011 labhubhisa u-20% wedolobha laseJoplin (USA) futhi lashiya abayi-160 beshonile ngaphezu kokulimala kwempahla. Kwakungenye yezinto ezonakalisa kakhulu emlandweni wakamuva wase-United States.
Iziphepho ziyizinto ezingabhubhisa, kepha kukhona ezinye ezikhangwa kubo kangangokuba zifuna ukusondela ngangokunokwenzeka ukuze bazifundisise kahle: zingabo oxosha isivunguvungu (noma ukuzingelwa).
Ngokwami, ngingathanda ukukujoyina, noma ngabe bekukanye kanye empilweni. Kepha hheyi, okwamanje kuyiphupho ukufeza.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Yiziphi iziphepho ezihlasele kakhulu emlandweni?